किन झर्छ कपाल ? यी हुन् रोकथामका उपाय « Mero LifeStyle
अधिकांशलाई कपाल झर्ने समस्याले सताउने गरेको छ । सुन्दरताका लागि कपालको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कपाल झरेर तालु खुइलिन्छ कि भन्ने चिन्ताले धेरैलाई पिरोल्छ । त्यसैले कपाल झर्नुका कारण के–के हुन् र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे छाला तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार भट्टको सुझाव यस्तो छ :
कपाल झर्नुका कारण
हर्मोनमा आएको परिर्वतनले पनि कपाल झर्छ । महिलामा गर्भावस्था र प्रसवको क्रममा शरीरमा हर्मोनको मात्रामा उतारचढाव आउने गर्छ । यस्तो बेला महिलामा अत्याधिक कपाल झर्ने समस्या हुन्छ । थाइराइड हर्मोनको असन्तुलन, महिनावारी बन्द हुने या अन्य हर्मोनसम्बन्धि गडवढीको कारण तीव्र मात्रामा कपाल झर्छ ।
हिजोआजको व्यस्त दैनिकीमा हाम्रो शरीरबाट बढी मात्रामा उर्जा बाहिरिने गर्छ । यसकै कारण तनावको मात्रा पनि बढेर जान्छ । धेरै मानिसमा बढी तनावकै कारण कपाल झर्छ ।
बढी मात्रामा जंकफुडमा निर्भर हुँदा शरीरमा विभिन्न पोषणको कमी हुन जान्छ । जुन कपाल झर्ने प्रमुख कारण हो । त्यस्तै, खानपानमा र शरीरको पोषणको बारेमा राम्रोसँग ख्याल नपु¥याउँदा पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ ।
कपाल झर्नुको प्रमुख कारण मध्ये वंशाणुगत पनि एक हो । यस्तो समस्यामा तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न । उचित आहारविहारलाई जीवनशैलीसँग जोडेर कपाल झर्ने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ ।
यदि शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनको कमी भयो भने पनि कपाल झर्छ । प्रोटिनको कमी भएको दुई देखि तीन महिनाबाट कपाल झर्ने समस्या देखिन थाल्छ ।
– कपाल झर्ने समस्याको कारण के हो, सर्वप्रथम त्यो बुझ्नका लागि चिकित्सक कहाँ जाने ।
– चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार तर्फ लाग्ने ।
– ब्यालेन्स डाइटमा ध्यान दिने पोट्रिनयुक्त खानेकुराहरु खाने ।
– तनाव कम लिने
– पर्याप्त मात्रामा निदाउने
– सकारात्मक सोच राख्ने
[…] यो पनि पढ्नुहोस् :भारतबाट नेपाल भित्रिने मानिसको लर्को अझै रोकिएनदशैंको मुखमा पनि भारत जानेको लर्को उस्तैचाडपर्वको चहलपहलले बढ्दै कोरोना जोखिमदसैंमा दुई पाङ्ग्रे किन्ने कि चार ? सुनको एक्कादेखि गाडीसम्म उपहारमैदसैँका साइत सार्वजनिक, टिकाको शुभ साइत १०ः०२ बजेदसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्यो, कहाँको भाडा कति ?सकेन्ड ह्यान्ड कपडा बेचेरै मालामाल, १ सयदेखि ३० हजारसम्मका लुगा (भिडियोसहित)‘लेहंगा र साडी डिजाइन गर्दैमा फेसन डिजाइनर भइँदैन’किन झर्छ कपाल ? यी हुन् रोकथामका उपाय […]
[…] अधिकांश सौंन्दर्य व्यवसायी महिलाहरुको परिवार यिनकै आर्जनमा निर्भर रहेकाले कतिपयले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको फेसियल हाउसकी प्रबन्ध निर्देशक सुष्मा महरा बताउँछिन् । ‘घरको सम्पुर्ण चुलोचौका सकाएर परिवार र आफ्ना लागि केही गरौँ भन्ने महिलाको संख्या यो व्यवसायमा धेरै छ’, महराले भनिन् ‘कोरोनाका कारण यि महिला पुनः भान्सामै सिमित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।’ अघिल्लो लकडाउनको बेला नै धेरै सौन्दर्यकर्मी पलायन भइसकेकाले बाँकीलाई जोगाइ राख्न सरकारले समेत विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।यो पनि पढ्नुहोस्सकेन्ड ह्यान्ड कपडा बेचेरै मालामाल, १ सयदेखि ३० हजारसम्मका लुगा (भिडियोसहित)‘लेहंगा र साडी डिजाइन गर्दैमा फेसन डिजाइनर भइँदैन’किन झर्छ कपाल ? यी हुन् रोकथामका उपाय […]